Naya Post Nepal | उडिरहेको विमानभित्र एक जोडीले स’म्माहालिन नसकेपछि यात्रुहरु हेरेको हेर्यै भए !
उडिरहेको विमानभित्र एक जोडीले स’म्माहालिन नसकेपछि यात्रुहरु हेरेको हेर्यै भए !
उडिरहेको विमानभित्र एक जोडीले सम्माहालिन नसकेपछि अन्य यात्रुहरु हेरेको हेर्यै भएका छन् । पाकिस्तानको कराचीबाट इस्ला माबाद जाँदै गरेको उडानमा त्यस्तो दृ श्य देखिएको हो ।
जोडीको व्यवहार देखेर अन्य यात्रीहरूले सम्झाउन नचाहेका पनि होईनन् । चालक दलका सदस्यहरुले पनि उनीहरुलाई राम्रोसँग वि मानभित्र त्यस्तो कार्य नगर्न भनेका थिए ।
विमान परिचालिकाले भनेको कुरा नमानेपछि उडानका क्रममा उनीहरुलाई कम्बलले छोप्नु परेको थियो । पाकिस्तानी सञ्चार माध्यममा आएको खबर अनुसार घटना कराचीबाट इस्लामाबा दको उडानमा भएको थियो ।
२० मेमा उडानका क्रममा एक जोडीको प्रेम अचानक बढेर जाँदा अन्य यात्रुहरु लजाउनुपर्ने स्थित सिर्जना भएको हो । चौथो पङ्तीमा बसेका उनीहरुले अन्य यात्रुहरूलाई असजिलो बनाएका थिए । यात्रु हरूले चालक दलमा यसको गुनासो गरेका थिए । त्यसपछि एक वि मान परिचालिकाले सार्वजनिक ठाउँमा संयमता राख्न अनुरोध गरिन् ।
तर उक्त जोडीले विमान परिचालिकाको कुरा मानेनन् । पुनः आफ्नो कामलाई निरन्तर जारी राखे । त्यसपछि उनीहरुलाई कम्बल दिइए को थियो । अन्य यात्रुले नदेखुन भनेर उनले कम्बल ओढाइदिएकी थिइन् । एयरब्लू कम्पनीको पीए–२०० उडानमा यो घटना घटेको थि यो ।
त्यस समयमा उनीहरुको ठिक पछाडिको सीटमा बसेका अधिवक्ता बिलाल फारुख अलवीले एयरब्लू (विमान कम्पनि) का कर्मचारीले त्यो जोडी वि रु द्ध केहि कारबाही नगरेको गुनासो गरेका छन् । यस घटनालाई अब पाकिस्तानको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अनुस न्धान थालेको छ ।
२०७८ माघ ८, शनिबार प्रकाशित0Minutes 228 Views